Siyaasiyiinta gobolada Waqooyi oo ka soo horjeestey heshiiska Baydhabo -
Home News Siyaasiyiinta gobolada Waqooyi oo ka soo horjeestey heshiiska Baydhabo
Siyaasiyiinta gobolada Waqooyi oo ka soo horjeestey heshiiska Baydhabo
Siyaasiyiinta ka soo jeeda maamulka Somaliland ayaa si weyn ugaga soo horjeestey heshiiska ay guddiga farsamada dhowaan ku gaareen magaalada Baydhabo.
Shir jaraa’id oo ay maanta ku qabteen magaalada Muqdisho ayay siyaasiyiintan waxa ay ku sheegeen inay ka xun yihiin shirarkii ay Dhuusamareeb iyo Muqdisho ku qabaneysay dowladda uu muddo xileedkeeda dhamaaday uu ahaa kuwo an loo dhameyn, isla markaana aysan jirin dad ku matalayay Siyaasiyiinta Gobolada Waqooyi ee loo yaqaan Soomaliland.
Gudoomiyaha Aqalka Sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa yiri; “Waxaa la leeyahay waxaa laga heshiiyey saddexdii arrimood ee madaxweyneyaasha ku heshiin waayeen shirarkii hore ka qeybgalay. Su’aasheydu waxay tahay shirkaa [Baydhabo] yaa ku heshiiyey? Dabeecadaha shirarkii madaxweyne Farma“Heshiiska Shirka Baydhabo anaga qeyb kama nihin,waa ayo cida noo heshiineysa wax aan qaadan karno ma ahan,aniga iyo Farmaajo waxaa isku diinahay Dastuurka”.
Sidoo kale waxaa shirka jaraa’id ka hadlay Prof Cabdi Ismaaciil Samatar oo ka falceliyey heshiiska la sheegay in guddiga farsamada ku gaareen magaaladda Baydhabo ayaa sheegay in aan lagu heshiin Baydhabo balse loo heshiiyay;
“Lama heshiininee waa naloo heshiiyey haddaan nahay reer waqooyi. Waana waran halbowlaha looga suray midnimadda”.
Shirka ka socday magaalada Baydhabo ee ay yeesheen guddiga farsamada ee laga soo xulay dowlad goboleedyada dalka,gobolka Banaadir iyo dowlada federalka ayaa sheegay inay gaareen heshiis ayna u gudbiyeen madaxda sare ee dalka.
Previous articleDjokovic destroys the Russian qualifier to reach the ninth final of the Australian Open
Next articleNASA’s Mars Rover Endurance Set for Spike Landing